Koorsooyinka aan bixino - Dugsiga Dhexe ee Bartamaha, Cambridge
Dugsiga Dhexe ee Bartamaha wuxuu bixiyaa koorsooyin Ingiriisi ah oo guud, Ingiriisi ah oo degdeg ah, Koorasyo ​​imtixaan ah iyo imtixaan. Macluumaadka ku saabsan koorsooyinka mid kasta waxaa laga heli karaa iyada oo la adeegsanayo liiska midigta.
Waxaan soo dhaweyneynaa ardayda oo idil sanadka oo idil waxaanu xirnaa keliya xilliga kirismaska.
Koorsadaada iyo jadwalkaaga
Koorsadaada waxay ku xiran tahay heerkaaga, markaa waxaan ku siinaynaa qiimeyn meelayneed markaad timaaddo. Waxaad sidoo kale qaadan kartaa Imtixaanka Ingiriisiga Cambridge, taas oo kuu sheegi doonta imtixaanka lagaa rabo inaad diyaariso. Tani waa hagaha kaliya, sidaa darteed waan kula talin doonaa intaad qaadaneyso koorso.
Koorasyadayada waqtiga-buuxa ah waxaa loogu yeeraa Ingiriisi guud (15 saacadaha saacadaha asbuucii) ama Ingiriisi degdeg ah (21 saacadaha saacadaha asbuucii). Casharradu waa subax kasta Isniinta ilaa Jimcaha, 09: 30 illaa 13: 00 oo leh qaxwaha fasaxa ah ee 11: 00. Haddii aad dooratid Ingiriisi khaas ah waxaa jira fasalo u dhigma Talaado, Arbaco iyo Khamiis saacadaha u dhexeeya 14: 00-16: 00.
Waxaan sidoo kale bixinnaa koorsooyin saacado ah oo kala duwan: wakhti kasta oo sannadka ah waxaad ka baran kartaa noo Koorsada galabnimo, oo ah qaybta galabnimo ee Ingiriisi ah oo degdeg ah, sida kor ku xusan. Waqtiyada qaarkood ee sannadka, waxaan bixinnaa waqti dhiman Koorsada Bilawga ah ee Bilawga ah on Talaado, Arbaco iyo Khamiista laga bilaabo 09: 30 ilaa 11.00.
Waxaa jira waxqabadyo galabnimo ama fiidiyo ah oo loogu talagalay mid ka mid ah ardaydeena, oo bixiya tababar dheeraad ah oo ku qoran Ingiriisiga.
Waxaad bilaabi kartaa Isniinta (marka laga reebo maalmaha ciidaha) ugu yaraan hal toddobaad. Ardayda badankood waxay bartaan toddobaadka 4-12. Ardayda qaarkood waxay bartaan ilaa hal sano. Waxaan kugula talin karnaa dhererka koorsada loo baahan yahay si loo gaaro himilooyin gaar ah.
Xadka fasalka ugu sareeya waa 10, laakiin inta badan waxaa u dhaxeeya ardayda 5 iyo 7 ee fasal kasta. Markaad timaaddo dugsiga waxaad samayn doontaa Imtixaanka Meeleynta si aad u qiimeyso heerkaaga. Markaa kadib ayaa laguugu dejin doonaa fasal ahaan heerka heerka naxwahaaga, kartida hadalka iyo ujeedooyinka shakhsi ahaaneed. Isticmaalida buugaag koorasyo ​​kala duwan waxaad baranaysaa Ingiriis iyada oo loo marayo mawduucyo kala duwan oo kala duwan iyadoo xoogga la saarayo xiriirka hadalka. Tani waxay ku lug leedahay wada shaqeynta, wadahadalka iyo doorka ciyaaraha. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad ballaadhiso erayadaada oo aad xoojiso aqoontaada naxwaha.
Macallimiintaada ayaa kaala talin doona imtixaanka ugu fiican adiga. Waxa kale oo aad qaadan kartaa imtixaanka 'Cambridge English'. ku...	Read More